Hiran State - News: HS:-Magaalada Bulo Burde oo noqotay goob ka caagan Shabaab kadib.
HS:-Magaalada Bulo Burde oo noqotay goob ka caagan Shabaab kadib.
HS:-Magaalada Bulo Burde oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Hiiraan ayaa maalmahii la soo dhaafay ku jirtay xaalad wal wal ah iyo dagaal laga cabsi qabo inuu ka dhaco degaankaas kadib markii ay meel aan sidaas ugu fogeyn magaalada aad ugu dhawaadeen ciidamada xoogaga Hiiraan.
Tacshiirad dhawaantaan ka dhacday duleedka magaalada Belet Weyne oo dhax martay xoogaga Hiiraan ayaa ugu danbeyn lagu guuleystay in la xaliyo,kadibna markii ay maqleen saraakiil ka tirsan Shabaab oo ku sugneed magaalada Bulo Burde in 30 maalmood gudahood ay ciidamada Ethiopia ku gaari doonaan magaalada Balcad ayaa waxaa shir deg deg ah iskugu yeeray waxgarad ku sugan meel dibada ka ah magaalada Bulo Burde saraakiil Shabaab ah qaasatan kuwooda Ka soo jeeda Hiiraan una sheegay waxgaradka iney taageerayaan in Hiiraan laga hirgaliyo maamul aan aheyn midka Xarakada Shabaab hor boodeyso iyaguna ay doonayaan damaanad ay ku bad badaan guryahoodana dib ugu laabtaan.
Waxgaradkii ayaa sheegay iney saraakiisha xoogaga Hiiraan kula laaban doonaan go,aankooda ayna tahay arin aad macquul u ah iyadoona waxii markaas ka danbeeyey ay Shabaabka ku sugan magaalada Bulo Burde u kala miirmeen reer Hiiraan iyo kooyto taasi oo xaalada Shabaab ee Bulo Burde ka dhigtay mid jahwarersan oo ay maalintiina soo galaan hebeenkiina ay magaalada dibada ka joogaan.
Qorshahan ayaa la shegaya in lagu doonayo in Shabaabka ku sugan Bulo Burde, Tuulada Buurweyn, iyo Jalalaqsi si fudud looga reebto hubkooda qasaaro xoogana halkaas loogu geysto oo aysan sidii Belet weyne si sahlan uga bixin.
Sikastaba kooxda Shabaab waa laga yabaa iney degaano aan Hiiraan aheyn ka qeyliyaan amaba wax ka tuur tuuraan laakinse Hiiraan wey ku adkaan doontaa maadama saraakiisha iyo ciidanka ugu badan ee ka soo jeeda Hiiraan ay hada shirar iyo sidii lagu nabadgalin lahaa ku mashquulsan yahiin.
Qaar ka mid ah Shabaab oo markii ay maqleen dagaalkii maalin dhaweyto ka dhacay Belet Weyne ee dhax maray ciidamada xoogaga Hiiraan dib ugu soo laabtay agagaarka magaalada durbaba waxaa la helay magacyadooda iyo goobaha ay duleedka magaalada kaka dhuumaaleysanayaan xaaladoodana aad ayey u adag tahay maadaama ay ku rafaadsan yahiin dhulka miyiga ah oo ay waayeen shacabkii iyaga caawin jiray oo waxkasta la daba joogay.
Sikastaba magaalada Bulo Burde maanta wey haawaneysaa xilikasta ayaane laga yabaa iney la wareegaan xoogaga Hiiraan halka ciidamada Ethiopia ku wajahan yahiin meelo ka baxsan Hiiraan oo ay soconayaan ilaa Balcad oo aan sidaas uga fogeyn magaalada Mogdisho, halka Amisomna imaan doonaan ilaa Balcad.
Dhibaatooyinka Shabaab ku heysta gudaha Soomaaliya maanta ma yara marka xaalada dhinackasta laga eego. dhinacaas iyo Jubada Hoose iyo Gedo inta badan waxaa farahooda ka baxay degaano badan oo ka mid ah gobolka Gedo. Sidoo kale dowlada Kenya ayaa u muuqata iney danahii ay ka laheyd Jubooyinka ka gaartay oo ay Shabaab ku duqeyneyso meelkasta iyadoona siweyn uga cuuriyaamisay dhaqaalahii kaka imaan jiray kooxda dekeda Kismaayo oo aan mudo shaqeyn.
Ugu danbeyn Sii joogitaanka Shabaab ee Hiiraan waa maalmo marka uu dhamaado shirar gooyni gooyni ah oo uga socda meel qarsoodi ah waxgarad iyo saraakiil Shabaab ah siiba kuwooda ka soo jeeda Hiiraan.
La soco wararkeena danbe iyo magaalada Bulo Burde
· admin on January 17 2012 10:21:45 · 0 Comments · 1717 Reads ·
14,613,389 unique visits